नयाँ शक्ति नेपाल | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: नयाँ शक्ति नेपाल
काठमाडौं । तत्कालीन नयाँ शक्तिका केही शीर्ष नेताहरु सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् । पूर्वमन्त्री कल्पना धमलासहित, तत्कालिन नयाँ शक्तिका सचिवालय
नयाँ शक्तिकी नेतृ सिमा नेकपामा प्रवेश, प्रचण्डद्धारा न्यानो स्वागत
काठमाडौँ, २५ बैशाख । तत्कलीन नयाँ शक्तिकी केन्द्रीय सदस्य सीमा विक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेकी छिन् । बुधबार अपरान्ह नेकपाको पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच
नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता घोषणा, मुख्य मुद्दा कार्यकारी राष्ट्रपति
काठमाडौं, २३ बैशाख । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच पार्टी एकता घोषणा भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकताको कार्यक्रम सुरु
ओली सरकार असफल भयो : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, ११ चैत्र । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले बाहृय लगानी घटेको,
बाबुरामले फेरी उठाए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली
रामेछाप, २२ माघ । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालको उपयुक्त शासन प्रणाली हुने दावी गरेका छन । जनसंवाद अभियानअन्तर्गत रामेछापको
विकास र समृद्धिका मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ : भट्टराई
गोरखा, ५ पुस : नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलबीच अबको प्रतिस्पर्धा विकास र समृद्धिको मुद्दामा हुनुपर्नेे बताउनुभएको छ । ‘दशौँ गोरखा महोत्सव एवं अन्तर
बाबुराम-हिसिला अमेरिकामा मस्त, छोरी मानुषी यमी सडकमा
काठमाडौं, २९ भदौ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पत्नी एवम् नेतृ हिसिला यमीसहित यतिवेला अमेरिका भ्रमणमा छन् । तर, यता उनी नेतृत्वको आफ्नो पार्टी भने बलात्कारीलाई